Knowledge Archives - MM Daily Life
တိုက်ဆိုင်လို့ မခံနိုင်ရင် ဘလော့သွားကြပါ…
တိုက်ဆိုင်လို့ မခံနိုင်ရင် ဘလော့သွားကြပါ… မယားရှိ ယောက်င်္ကျားတွေ၊ လင်ရှိတဲ့ မယားတွေအသေချာ ဖတ်ကြည့်သွားကြပါ …။ လင်ရှိတဲ့ မယားတွေမယားရှိတဲ့ ဖွန်ရူးတွေ သေချာဖတ်ပါ။ ဒူးနဲ့မျက်ရည်သုတ်ရတဲ့ ဘဝမရောက်ခင် ပြင်သင့်တာကိုပြင်ပါ …။ သက္ခာ အကြောက်တရား မရှိရင်ဆက်လုပ်ချင်ရာလုပ်ကြပါ။ သူတော်စဉ်ယောင်ယောင် လူကြီးလူကောင်းယောင်ယောင်နဲ့ ကြောင်သူတော် ကြွက်သခိုးမလုပ်ကြပါနဲ့ …။ Online သုံးပြီး အရွံဆုံးက လင်ရှာမယားရှာ လင်ရူးဖွန်ရူး တွေပဲ။ အိမ်ကညီမ အမနဲ့ဇနီမယားကို လူများတွေကြည့်မှာကို ကြောက်တဲ့လူ သဝန်တိုတတ်တဲ့လူ သူများသားမယားကိုကြတော့ ဘာလို့အချောင်နှိက်ချင်နေကြတာလဲ …? တိုက်ဆိုင်လို့ စိတ်ဆိုးရင် တစ်ခါတည်း Block သွားပါ အမှန်တရားက အမှန်တရားပါပဲ …။ “အိမ်ထောင်ရှင်နှင့် On Line ” အန္တရာယ် ခေတ် ကာလ ပြောင်းလာသည်နှင့်အမျှ(ပြစ်မူ့)ကျူးလွန်မှု့များသည် … Read more
အသက် (၂၀) ကျော်ရင် ဘဝက ပိုပြီး ပျော်စရာကောင်းလာတာ ဒီအချက်တွေ ကြောင့်ပါ…
အသက် (၂၀) ကျော်ရင် ဘဝက ပိုပြီး ပျော်စရာကောင်းလာတာ ဒီအချက်တွေ ကြောင့်ပါ… Hအသက်(၂၀)ကျော်ရင် ဘဝက ပိုပြီး ပျော်စရာကောင်းလာတာ ဒီအချက်တွေကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော် …။ လူတော်တော်များများရဲ့ အထင်က အသက်ငယ်တုန်းမှာ ပျော်စရာတွေများပြီး အသက်လေးနည်းနည်း ရလာတာနဲ့ ပျော်စရာတွေ ရှားပါးလာတယ်ပေါ့။ တကယ်တမ်းမှာတော့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ပိုများတတ်ပြီးတော့ ၂၀ ကျော်လာတာနဲ့ ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပိုအားကိုးနိုင်လာတဲ့အတွက် စိတ်ဖိစီးမှုတွေ သိပ်မရှိဘူးဆိုတာကို ဒီအချက်တွေက သက်သေပြလို့ နေပါတယ် …။ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အလှကို ပိုလက်ခံလာတတ်တယ်” အသက်ငယ်ရွယ်တုန်းမှာတော့ သူများတွေရဲ့ လှပမှုတွေကို အားကျခဲ့ပေမယ့် အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ရဲ့ အလှက တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာ သိလာပြီး ကိုယ့်ရဲ့ နဂိုအလှကို သဘာဝကျကျလေး ပိုလှလာအောင် ပြင်ဆင်လာတတ်တယ် … Read more
လူတစ်ယောက် ဘဝမှာ ဘာကြောင့်မပျော်ရွှင်ရတာလဲ …?
လူတစ်ယောက် ဘဝမှာ ဘာကြောင့်မပျော်ရွှင်ရတာလဲ …? (1) ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုမရှိခြင်း” မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုမရှိခြင်းက သင့်ဘဝကို ပျော်စရာတွေပျောက်ဆုံးစေမယ့် တစ်ခုတည်းသော အရာပါ …။ယုံကြည်မှု မရှိရင် ဘယ်အရာကိုမှ မလုပ်ရဲပဲ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ အားငယ်စိတ်တွေပဲ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ် …။ (2) ကိုယ့်ကိုယ်ကို သူများနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခြင်း” ကိုယ်ကသူမဟုတ်တဲ့အတွက် ဘယ်တော့မှ သူများနဲ့မနှိုင်းယှဉ်ပါနဲ့ သူ့မှာလဲ သူ့တန်ဖိုးနဲ့သူရှိသလို သင့်မှာလဲ သင့်တန်ဖိုးနဲ့တူတဲ့အရာတွေရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တန်ဖိုးခြင်းမတူတော့ ရလဒ်ခြင်းလဲ ဘယ်တူညီနိုင်ပ့မလဲ …၊ဒါကိုပဲ နှိုင်းယှဉ်ပြီး စိတ်ဓာတ်တွေကျမနေပါနဲ့တော့။ ဘယ်တော့မှလဲ သူများနဲ့ မနှိုင်းပါနဲ့ သင်ကသင် သူကသူပါပဲ မတူညီနိုင်ပါဘူး …။ (3) သူတစ်ပါးဝေဖန်ချက်တွေကိုဂရုစိုက်လွန်ခြင်း” လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် ကဲ့ရဲ့ခြင်း၊ ဝေဖန်ခြင်းက ဘယ်သူမှ မလွတ်ကင်းပါဘူး။ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်ကိုယ့်လမ်းကိုယ်ဆက် လျှောက်နေဖို့ပဲ … Read more
အကြီးတွေ ဘယ်တော့မှ နားလည်မှာ မဟုတ်တဲ့ အငယ်တွေ ကြုံရတတ်တဲ့ ဒုက္ခလေးတွေ
May 21, 2022 by MM Daily Life
အကြီးတွေ ဘယ်တော့မှ နားလည်မှာ မဟုတ်တဲ့ အငယ်တွေ ကြုံရတတ်တဲ့ ဒုက္ခလေးတွေ ၁။ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းရိုက်ထားတဲ့ ငယ်ဘဝက ပုံဆိုတာ ရွှေလိုရှားတတ်တယ်။ ကိုယ့်ပုံတိုင်းမှာ အစ်ကိုကြီး၊ အစ်မကြီးတွေက ကန့်လန့်ကန့်လန့်နဲ့ပါနေတတ်ပြီလေ။ ၂။ ဂိမ်းကစားတိုင်း ကိုယ်က ဘိတ်ဆုံးမှာပဲ ဆော့ရတတ်တယ်။ ဒီကြားထဲမှာ ကိုယ်က “အရေးမပါတဲ့ အာလူးလေး” ပဲ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ၃။ အမျိုးတွေအားလုံးက အကြီးကို သည်းသည်းလှုပ်ချစ်ခဲ့ကြတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ် “အကြီးကဘယ်လို” ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ အမြဲနှိုင်းယှဉ်ခံခဲ့ရတယ်။ ၄။ ကိုယ်မွေးလာတဲ့အချိန်၊ ကိုယ်လမ်းလျှောက်တတ်တဲ့အချိန်တွေဟာ မိဘတွေအတွက် အတွေ့အကြုံဟောင်းတွေဖြစ်နေပြီ။ ကိုယ်လုပ်တဲ့အသစ်တွေတိုင်းကတော့ သူတို့အတွက် အဟောင်းတွေပါပဲ။ ၅။ ကိုယ်ကဘယ်လောက်ပဲ အသက်ကြီးလာလာ အိမ်မှာတော့ ကလေးလေးပါပဲ။ စကားကြီး၊ စကားကျယ်ပြောမိလို့ကတော့ “ကလေးကများ” ဆိုပြီး ခေါင်းခေါက်ခံရပြီပဲ။ ၆။ … Read more
ဘုန်းကံမြင့်သော မိန်းမများ…အကြောင်း အမျိုးသမီးများအတွက် ခွန်အားဖြစ်စေသောပိုစ့်လေးတစ်ပုဒ်…
အစွန့်ပစ်ခံ မိန်းမသားတို့၏ ဘုန်းကံဆိုတာ ယောကျ်ား ဖြစ်သူကထားခဲ့လို့ဖြစ်စေ ချစ်သူကထားခဲ့လို့ဖြစ်စေ အငယ်အနှောင်းယူသွားလို့ဖြစ်စေ အပြစ်ရှာ ထွက်ခွာလို့ဖြစ်စေစွန့်ပစ်ခဲ့ရင် မိန်းမ တချို့ဘဝ ပျက်မတတ်ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်အမှန်က ပျော်ရမှာပါလက်ခုပ်တီးပြီးကို ကျေနပ် ဝမ်းမြောက်စွာပျော်နေရမှာပါကိုယ်ငယ်ရွယ်ကျန်းမာတုန်း သန်စွမ်းနေတုန်း ရှာဖွေနိုင်တုန်းမှာ သိလိုက်ရတဲ့ အတွက် ကိုယ့် တန်ဖိုး နားမလည်တဲ့လူရဲ့ ဘေးနားမှာနေပြီး အဓိပ္ပါယ်မဲ့ ဖြတ်သန်းရ ခြင်းထက် နှောင့်ဖွဲ့ခြင်းမဲ့စွာ ဘဝ ကိုလွတ်လပ်စွာ တည်ဆောက်ရခြင်းက ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကို နားလည်ခဲ့ရင် ဒီမိန်းမဟာ ပျော်သင့်ပါတယ် တခါက ဘုရင်ကြီး တစ်ပါးမှာ သမီး(၃)ယောက် ရှိသတဲ့ ဘုရင်ကြီးက သမီးတော် တို့ ဒီလိုနေနေရတာ ဘာကြောင့်လဲလို့ မေးတဲ့အခါ သမီးအကြီး (၂)ယောက်ကခမည်းတော် ကျေးဇူးကြောင့်လို့ အမြဲလျှောက်ပြီး အငယ်ဆုံး သမီးတော် ကတော့သမီးတော် ရဲ့ဘုန်းကံ ကြောင့်လို့လျှောက်သတဲ့။တိုတိုပြောရရင် ဘုရင်ကြီး … Read more
မဖြစ်မနေသိသင့်တဲ့ အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ အတွင်းကျတဲ့ ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ(၉)ခု
မဖြစ်မနေသိသင့်တဲ့ အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ အတွင်းကျတဲ့ ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ(၉)ခု ပျိုမေတို့အနေနဲ့ နေ့စဉ်ဘဝထဲမှာ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံကျန်း မာရေးဗဟု သု တတွေကို စာအုပ်တွေကတဆင့်၊ ကိုယ့်မေမေ၊အစ်မ နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဆီကတဆင့် သင်ယူရတယ်ဆိုပေမယ့် စာ အုပ်တွေထဲမှာလည်းမပါ၊ ဘယ်သူကမှလည်း မပြောပြတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်း မသိဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးသူနဲ့တောင် တိုင်ပင်ဖို့ခက်တဲ့ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ အခြေခံအချက်လေးတွေကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် .. ။ (၁) အတွင်းခံတစ်ထည်ကို တစ်ခါထက် ပိုဝတ်သင့်မသင့် Daily use pad ကို မသုံးဘူးဆိုရင်တော့ နောက်တစ်ခေါက်ထပ်မဝတ်သင့်ပေမယ့် Daily use pad ကိုသုံးတယ်ဆိုရင်တော့ နောက်တစ်ခါ ထပ်ဝတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂ ခေါက်ထက်တော့ ပိုမဝတ်သင့်ပါဘူး။ (၂) အတွင်းခံမဝတ်ဘဲ ဘောင်းဘီရှည်ဝတ်လို့ရမရ … Read more
အတိတ်နိမိတ်- သင့်ပါးစပ်က ထွက်တဲ့စကားလုံးတိုင်းက သင့်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်
ပိုက်ဆံမရှိဘူးလို့ ပါးစပ်ကအမြဲပြောနေရင် တနေ့တခြား ကြပ်တည်းလာတာ ပိုသိသာလာတယ်၊ အဆင်မပြေဘူးလို့ ခနခနတွေးနေရင်ပိုပြီး အဆင်မပြေဖြစ်လာတယ်။ ဒါ အယူအဆမဟုတ်ဘူး ဘာသာရေး အတွေးမဟုတ်ဘူး။ Psycho သဘောပဲ ကြားရဖန်များရင် အတွေးတွေဖြစ်လာတယ်။ ပြောပါများရင် အာ့အတိုင်းယုံကြည်လာတယ်။ ကြာတော့ ကိုယ့်စိတ်ကူးထဲက အတိုင်းကိုယ့်နှုတ်ထွက်စကားတွေ အတိုင်းကိုယ့်ဘဝက ပြောင်းသွားတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အမြဲတမ်း အကောင်းဘက်ကတွေးပါ။ အကောင်းဘက်ကို တွေးပါ အောင်မြင်သူလိုတွေးပါ။ အောင်မြင်သူတွေနား ချဉ်းကပ်ပါ လို့ပြောကြတာပေါ့။ လဲကျတာဟာ ပြသနာမဟုတ်ဖူးလေ။ ပြန်မထချင်တော့တာ or ငါ ပြန်မထနိုင်လောက်ပါဘူးလို့တွေးတာ လက်လျှော့လိုက်တော့မယ်ဆိုတာကသာ ပြသနာကြီးပါ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာထက် ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတွေးဖို့ ပိုလိုတာပါ။ လူတိုင်းမှာ ခက်ခဲတဲ့အခိုက်အတန့်တွေရှိတယ် ဖြေရှင်းပုံပေါ်မူတည်ပြီးလူတွေရဲ့ ဘဝအခြေအနေတွေကွာသွားတာပါ။ ခရက်ဒစ် Zawgyi ပိုက္ဆံမရွိဘူးလို႔ ပါးစပ္ကအၿမဲေျပာေနရင္ တေန႔တျခား ၾကပ္တည္းလာတာ ပိုသိသာလာတယ္၊ အဆင္မေျပဘူးလို႔ … Read more
မိုက်တယ် … ရေးချက်ကို ကြိုက်လို့ ကူးပြီးပြန်တင်တာ
စာသားတွေက ကြမ်းထော်နေတာပဲ 👍မိုက်တယ် … ရေးချက်ကို ကြိုက်လို့ ကူးပြီးပြန်တင်တာ👌 သိန်း၈ဝဝဝတန်ကားလက်ဆောင်ပေးတဲ့ ယောကျ်ားကိုလိုချင်ရင် …. ကိုယ် ကိုယ်​တိုင်၌က ရုပ်ပိုင်းဆိုင်​ရာရော …. စိတ်ပိုင်းဆိုင်​ရာပါ အနည်းဆုံး တော့သိန်း ၄ဝဝဝလောက်တန်အောင်ကြိုးစားကြပါ .. ကိုယ်တိုင်က ၁ဝတန်းလည်းမအောင်ဝင်ငွေက တလ ၂သိန်းမပြည့် ၊ ရုပ်ရည်ကရွက်ကြမ်း ရည်ကြို …. မိဘကလည်း လက်လုပ် လက်စား ဘဝသမား …. အဲ့လိုလူမျိုးတွေက သိန်း ၈၀၀၀ တန် ကားလက်ဆောင်ပေးတဲ့postကို …. သူတို့ရည်းစား ကောင်လေးတွေဝေါမှာ လာလာ Tag ကြတာမြင်တော့ ငါ့တပည့်တွေအစားရင်နာမိတယ် ….. Ro ခွင့်ရှိတယ် Overtine ခွင့်မရှိဘူး။ လက်ချင်းချိတ်ပြီး 200 တန်​ YBS တူတူစီးရဲတဲ့ လက်တွဲဖော် … Read more